Mai Chibwe VekwaZimuto: Kudziya kwemuviri kunoderedzwa nei?
Ndoda kumbotaura pamusoro pe CONDITION inoitika kuti muviri wemunhu usadziya zvakakwana. Ndaita nguva inopfuura gore ndisina kuihwisisa. Ndaifunga kuti vanhu vese vane BODY TEMPERATURE yakafanana asi handizvo. Saka ndichada kumboongorora kuti chii chinoitisa kuti muviri asanyanyodziya uye zvinokwanisika kugadziriswa here.
Temerature yemunhu inofanira kunge iri pa 36.4 to 37.1 C. Kana ikaderera pasi kana kukwira kupfuura apa munhu anofanira kumiramira kutoi idzokere ipapa. Kana ari mwana mudiki akawanikwa ane temperature iri pamusoro, hana yomubereki inorova nokutya nokuti zvinotyisa. Kukwira kwe Temperature mwana avete zvinouraya vana vakawanda munyika dzese zvinova izvo zvinodzivisigwa vabereki kuvata norusvava. Kana kukatonhora munhu anokwanisa kudzikira temperature zvinokwanisazve kutyisa. Vabereki vakawanda vanofukidza vana vavo kuti vasatonhogwa.
Asi kune vanhu vakawanda vane temperature iri pasi pe 36.4 to 37.1 C asi pasingaonekwi kuti pane chingahi chakashata paari munhu iyeye. Munhu haaiti temperature yakafanana zuva rese. Mangwanani muviri unotonhora kupfuura manheru kuvanhu vakawanda. Izvi zvinoitiswa nokushanda kunoita vanhu. Zvikuru kukwira kwayo pazuva kunenge kuri pakati pemanhambha atataura awa
Kozoita vamwe vanhu vane temperature iri pasi nguva dzese. Kana Dhokotera akaona kuti uri munhu akadai, anotanga nokutarisa kuti une chimwe chezvakawanda zvinokonzera kudai here?
2. hyroid (hypothyroidism)
4. Adrenal gland insufficiency (Addison's disease)
5. Hypothalamus dysfunction
8. Widespread infection (sepsis)
9. Excessive use of alcohol
10. Use of illicit drugs
11. Medications, such as phenothiazines, barbiturates, opiates, clonidine, lithium and benzodiazepines
13. Impaired shivering capacity in elderly
18. Vasoconstriction failure
21. Paget's disease of bone
23. Cerebrovascular injury
24. Cerebral trauma
25. Diabetic ketoacidosis
26. Wernicke's encephalopathy
27. Carbon monoxide poisoning
28. Anoxic brain injury
29. Cardiac arrest
30. Organophosphate poisoning
31. Spinal cord lesion
32. Terminal malignant disease
33. Severe hepatic cirrhosis
Kuti muviri wemunhu ukwanise kuchengetedza temperature iri pa 37 apa zvinoitika zvakawanda chose asi chimwe chazvo chikashaikwa temperarture inotadza kuramba iri pamwe chete apa. Muviri unoshandisa zvimwe zvinohi ma Protein akagadzigwa nema ENZYME. Ma ENZYME awa anokasira kuvira okanganisika kana temperature yakwira mumuviri. Unokwanisa kufa kana vamwe vakasakasira kukubatsira kudzikisa temperature.
Kana kwatonhora ukanyaya kutonhogwa, vanokuwana vanofanira kuhwisisa kuti kana waita HYPOTHERMIA temperature yako inofanira kukwidzwa zvishoma nezvishoma. Ukangononikwa pedo nemoto ndipo paunotofa. Kuhosipitari vanokufukidza machira vokudziisa muviri zvishomanana. Kwahi kune umwe wekuZvimbabwe akawanikwa ari muSNOW achiita seafa akazoonekwa kuti mupenyu atova kuchipatara. Kwahi vakamuisa mufiriji ndokutanga neko kunotonhora ndokukwidza temperature yake kusvika yakwira yasvika pa 37.
Muviri wemunhu une temperature mbiri. Kunoti yemukati memuviri iyi tatinoti Body Temperature inova iyo 37 koti yepaganda inohi Skin Temperature inobatsira kuchengetedza body temperature.
Kuziva kuti temperature yako iri pasi
Kana uchiwanzorezvana noumwe munhu toti murume/mukadzi wako, mese munokwanisa kukasira kuziva kuti umwe wenyu ane temperature iri pasi kana pamusoro peyeumwe. Ukazviziva nhasi, woona zvakangodarozve mangwana asi mese musingagwari, chitanga kufungira kuti une dambudziko iri. Wadaro chirega kufunga kuti zvausina chinogwadza hauna dambudziko.
Vakawanda vane dambudziko iri vanotiudza kuti zvinotaridzika kuti varume vavo Havana mufaro nokusadziya kwemiviri yavo. Pachivanhu pedu mukadzi ndiye anodziya obva adziisa murume zvikuru kana kuchitonhora. Zvino kana tichiona munhu ane temperature iri pasi, kana kwatonhora haakwanisi kudziisa murume/mukadzi wake. Zvoita sokuti murume wake haadi kuva pedo naye.
Unokwanisazve kuona uchibuda ziya asi vamwe vakangogara vasingataridzi kupiswa. Zvinotaridza kuti pane chakanganisika. Kana zvichiwanzoitika ziva tora temperature yako uone pairi.
Zvokuita kana Body temperature yako yadzika.
Chokutanga kutarisa zvikonzero zvinozikamwa woona kuti hauna kuzviita. Kana wakazviita chikasira kuti undoonekwa kuti ndizvo here zviri kukonzera temperature yako kuva pasi. Kana uchiziva kuti hauna kuzviita enda unoonekwa kuti vakuudze kuti chii chiri kukonzera.
Tese tinoziva kuti pachivanhu pedu ukangoudza munhu kuti une dambudziko, anokuudza kuti enda unotsvaka mushonga wekuti newekuti ugomwa zvipere. Hapana chakaipa kumwa mishonga yausingazivi kwayabva kana kuti zvainorapa. Kuda kwako kumwa mushonga, asi kuti kana une dambudziko rinoda kurapiwa, tanga wafunga nokuhwisisa kuti kune dzimwe nyaya dzinoda kuti ukasire kudzigadzirisa. Enda kwamurapi uudzwe kuti dambudziko rako riri kubva pai. Kana waziva ukazodawo hako kutsvaka mishonga yemusango, zvava kwauri. Kungomwa mushonga usingazivi handizvo.
Mishonga yechivanhu inowanikwa hayo asi haina DOSE kureva kuti unokwanisa kuisa OVERDOSE pama KIDNEYS ako wotowedzera nhamo. Uyezve hakuna anonyatsoziva mashandire ayo. Hazvirevi kuti haishandi.
Varapi vanotarisa zvese voona kuti chingava chakaipa pauri chii vokupa mushonga wechimwe chezvikonzero zvanyogwa pano. Asi ngatibvumirane kuti mahosipitari haakwanisi kutarisa zvese zvikonzero izvi saka kazhinji iwe ukavaudza HISTORY yako vanoita zvokufembera kuti chinonyanya kuva chikonzero chii pazvinhu izvi. Vadaro vanokupa mushonga votarisa kuti uri kushanda here.
Dzimwe nguva hazvina mushonga. Toti une temperature yakadai nokuda kwekuti wakangozvagwa muviri wako usingakwanisi kuziva kuti 37 iri papi. Iyi inonzi pachirungu PROGRAMMING ERROR or, MUTATION inoti vanokuona hapana chigwere chavanoona iwewo hapana chaunoona chakasiyana nevamwe asi vanokubata vanoti unotonhora muviri. Pakadai hazvigadziriki pamishonga inozikamwa.
kugutsa mukadzi pabonde
Zvemu viri waka tonhora zvino torerwa tsangamidzi (ginger root) woipara kubvisa kakanda kekunze. Wochekacheka kana kutswanya, inongoitazve usina kutswanya woyi bhoirisa mumvura kwe maminetsi 5 or so. Kana yaibva woibura womimina wonwa kana uchida kuisa shuga zvakanaka. Mushure me 30 minetsi muviri unenge wava kuto dziya. Gwenzi rinonzi ndorani kubika bota, ndere kupisisa muviri,kudzora nyama dzako neche mukati, kurapapa chibereko, chikosoro nezvimwewo zvakati wandei. Saka hariite kugara usina. Ndinoku tendai mai Chibwe nekudzidzisa kwamaka funga kuita uku, zvakare nekutipa kwenyu mukana wekuti tibatsiridzewo pazviri. Ndini Vashava67